Mon Mon's Diary: ၃နှစ် မပြည့်ခင် အရွယ် သားသား
Blog မရေးတာတောင် အတော်ကြာသွားပါပြီ။ သားလေး အကြောင်းကို အရှည်ကြီးရေးမယ်လို့ စိတ်ကူး ထားတယ်။ မရေးဖြစ်တာ ၆လနီးနီးလောက်ရှိတော့မယ်။
သားလေးက အခုဆို ၃နှစ်ပြည့်ဖို့ ၂လ လောက်ပဲလိုတော့တယ်။ သားလေးက Nursery Songs တွေ အတော်ရနေပြီ။ သားက English, Myanmar, Mandarin ၃ မျိုးကို နားလည်တယ်။ အိမ်မှာ အမေနဲ့ အဖေက ဗမာလိုပြောရင် သားက English လိုပြန်ပြောတယ်။ ၂ယောက်စလုံးကလဲ သားကို အချိန် မပေးအားဘူး။ သားက ကျောင်းမှာပဲ အနေများတော့ English, Mandarin ပဲပြောတယ်။ သား ၃နှစ်ကျော် ၄နှစ်နီးပါးမှ ဘုန်းကြီးကျောင်း ပို့မယ်။ တလောက ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ကထိန်သွားတာ သားက ဘုန်းကြီးကို မြင်တော့ ဦးတော်လုပ်ဆိုတော့ ကျကျနနထိုင်ရှစ်ခိုးတယ်။ ဘုန်းကြီးက လက်မှာ ပရိတ် ကြိုးလေးပတ်ပေး မယ်ဆိုတော့ သေချာလက်ဖြန့်ပေးတယ်။ အဲဒါ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပဲ။ ကျွန်မတို့ ၂ယောက်လုံး အံတောင်အော်ယူရတယ်။ ဘေးက လူတွေက ကလေးလေးက လိမ်မာလိုက်တာ လို့ပြောတော့ သားသား မျက်နှာလေးက ပြီတီတီရုပ်ကလေးနဲ့။ သားသားက အိမ်မှာ ကျွန်မဘုရားရှစ်ခိုး တာမြင်ရင် ဦး၃ကြိမ်လာ ရှစ်ခိုးတယ်။ ၁ခါ၁လေ ဘုရားကရှေ့မှာ သားသားက နောက်ကနေ ထုိုင်ပြီး ပြောင်းပြန်ရှစ်ခိုးတာ။ ပြီးရင် ကျွန်မက ဘိုးဘိုးကို သွားပြီး ဦးတော် လုပ်ဆိုရင် သွားပြီး ဦးတော် သွားလုပ်တယ်။ ၁ခါ ၁လေ ရှစ်ခိုးတာပြောင်းပြန်ကြီး ဖြစ်နေတာ။ သားသားကို ကျွန်မအဖေက iPad 1 လေးပေးထားတော့ အဲဒီအထဲမှာ ဗုဒ္ဓ၀င် ဇာတ်လမ်းလေး ပါတယ်။ အဲဒါကိုကြည့်ပြီး အဲဒီအထဲက ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊သံဃံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ လဲရနေပြီ။
သားသားကို ထမင်းစ ကျွေးနေပြီ။ အရင်က ဆန်ပြုတ်ပြုတ်ပေးတာ။ ထမင်းစ စားတာ ၁လ တောင် မရှိသေးဘူး။ Weekend ဆိုရင် သားသားကို ကစားကွင်းမှာ ကျွေးတယ်။၂ယောက်စလုံးကျွေးရတာ။ ကျွန်မက သားသားကိုကျွေး၊ သားသားအဖေက သားသား ကိုပျော်အောင် လုပ် အဲဒီလိုကျွေးရတာ။ ညနေဆိုရင်တော့ သားသားကို iPad ပေးပြီး ကျွေးရတာ။ စစချင်းကျွေးတော့ အကြာကြီးပဲ။ အခုတော့ အလွန်ဆုံး နာရီဝက်ပဲကြာတယ်။ ကျောင်းမှာ ကိုယ်ဟာကိုယ် စားရတာ။ ဆရာမပြောတော့ ထမင်းစားတာ ၁နာရီတောင်ကြာတယ်။ ထမင်းကုန် တယ်တဲ့။ သားသားက အခု ဒီလ 17 Dec 12 မှာ တတန်းတက်သွား ပြီ။ Pre-Nursery လေ။ အရင်က ဆရာမတွေက လုပ်ပေးတယ်။ အခုအ တန်း မှာ ကိုယ်ဟာကိုယ်လုပ်ရ တာ။ သားသားက ကျောင်းမှာ အတန်းတူတာတွေနဲ့ မဆော့ဘူး။ ကြီးတဲ့သူတွေနဲ့ပဲလာဆော့ တယ်။ ကျောင်းမှာလဲ သားသားက အရမ်းစွံတယ်။ ဆရာမတွေပြန်ပြောတာ Mickey မှာ Girlfriend တွေ အများကြီးပဲ တဲ့။ ဆရာမတွေ ပြန်ပြောတာ အတန်းကြီးကကောင်မလေး ၁ယောက်ဆို Mickey ကို တအား ချစ်တာတဲ့။ မနက်တုိုင်း Mickey, I love you ဆိုပြီး လာလာဖက်လို့တဲ့။ ၁ခါ ကျွန်မကျောင်း သွားကြိုတော့ တံခါးပေါက်ကနေ သားသားကိုချောင်းကြည့်တာ သားသားက ကောင်မလေး ၁ယောက် ပေါင်ပေါ်မှာ ခေါင်း တင်ပြီး နေနေတာ။ ကျွန်မက အမလေး သားသား သားသား ဆိုတော့ ဆရာမက Mickey မှာ Girlfriend တွေ အများကြီးဆိုပြီး တိုင်တော့တာပဲ။ သားသားမျက်နှာကို ကျွန်မကြည့်လိုက်တော့ သားသားက ပြီတီတီ မျက်နှာလေးနဲ့။ သားသားမှာ အဲဒီ ပြီတီတီ မျက်နှာလေးကြောင့် ချစ်စရာကောင်းနေ တယ် ထင်တာပဲ။
သားသားက ညဆို သူပျော်ရင် သီချင်းတွေကိုအော်ဆိုတော့တာပဲ။ ၁ခါ၁လေ Mandarin လိုလဲပါတယ်။ ကျွန်မတောင် စဉ်းစားမိတာ ကြီးလာလို့ တရုတ်လိုပြောနေရင် ကျွန်မတို့ ၂ယောက်က နားမလည် သားသား ၁ခုခု မကောင်းတာ လုပ်မိမှာ စိုးရိမ်မိတယ်။ သားသားကျောင်း မှာ ဘာတွေလုပ်သလဲဆိုတာ ညကျရင် ၁ခုခုပြီး ၁ခုလုပ်ပြတာ။ သားသားက အရီ အရမ်းသန်တယ်။ သားသားရီရင် ဘယ်လိုလေးမှန်းကို မသိဘူး။ မရပ်မနားကိုရီတာ။ အဖိုးကိုဆိုလဲ ဗိုလ်ကျသလား မမေးနဲ့။ ကျွန်မ အဖေကလဲ အရမ်း အလိုလိုက်လွန်းလို့ အမြဲတမ်း ရန်ဖြစ်ရတယ်။ iPad iPhone အရမ်းကျွမ်းတယ်။ မျက်စိပျက်မှာဆိုပေမယ့် အဲဒီကနေ ပညာရနိုင်တယ်ဆုိုပြီး လွတ်ထားရတယ်။ အဲဒီက ကလေး သီချင်းတွေဆို ရှာထားပေးတယ်။ သားသားအရမ်းကြိုက်တာ Mickey-Mouse Clubhouse, Angry Birds, Tele Tubby အရမ်းကြိုက်တယ်။ Tele Tubby သီချင်းဆို အစ အဆုံး အကုန်ရ တယ်။ သားသားကို Power Ranger, Batman အဲဒီလိုတုိုက်ခိုက်နေတဲ့ Cartoon ကားတွေ မပြဘူး။ တော်ကြာ အဲဒါတွေကြည့်ပြီး လိုက်အတုခိုးနေရင် ပိုဆိုးမယ်။
၁ခါ၁လေ သားသားက ဒီနေ့ Mickey-Mouse အရမ်း ကို စိတ်ဝင်စားနေရင် အပြင်သွားရင် ယူသွားတယ်။ ကျွန်မမှာ အဲဒါမပျောက်ရအောင် ထိန်းရသေးတယ်။ အမွေးပွအရုပ်မဟုတ်ဘူး။ ပလပ်စတစ် အရုပ်လို သေးသေးလေးတွေ။ ညညသားသားအိပ်ရင် အဲဒါတွေ ရှာရတာ အလုပ်၁လုပ်၊ သားသားက ဗမာပီသတယ်။ ဗမာအစားအစာ အကုန်ကြိုက်တယ်။ မုန့်ဟင်းခါး အုန်းနုို့ခေါက်ဆွဲ အကုန်ကြိုက်တယ်။ မုန့်ဟင်းခါး နဲ့ ထမင်းဘယ်ဟာရွေးမလဲ မေးကြည့်ရင် မုန့်ဟင်းခါးပဲ ရွေးတယ်။ ကွာစေ့လဲ အရမ်းကြိုက်တယ်။ ကွာစေ့ကို သားသားက 'ကွာကွာ' တဲ့။ ကျွန်မက ဂြိုဟ်တုတံဆိပ်ကွာစေ့ အရမ်းကြိုက်တယ်။ ရန်ကုန်ကနေ ပို့ပို့ပေးတာ။ ကွာစေ့ကိုမြင်လို့ကတော့ အနားကနေ မခွာတော့ဘူး။ ကျွန်မလဲ မစားရတော့ဘူး။ သားသားကိုပဲခွာကျွေး ရတော့တာ။ Chocolate လဲ အရမ်းကြိုက်တယ်။ M&M Chocolate လဲကြိုက်တယ်။ အဲဒါလေးတွေက အရမ်းသေးတော့ အရင်က မကျွေးဘူး။ ကလေးဆိုတာ ငယ်နေသေးတော့ဘာမှမသိတတ် မပြောတတ် ဆိုတော့ မျိုချမိလို့ လေပေါက်ပိတ်မိနေမှာဆိုးလို့ အခုမှကျွေးတာ။ သားသားစားချင်ရင် 'ချော' ဆိုပြီး လာ လာတောင်းတတ်တယ်။ သားသားက ညညဆုိုရင် ၉ နာရီလောက်ဆိုရင် ဆာတတ်တယ်။ ၁ခါ၁လေ အဖိုး ဆီမှာ သွားသွားတောင်းစားတာ။ ဗမာပြည်က ငါးမုန့်ကြော် အဖုလေးတွေပါတာ။ အဲဒါလဲ အရမ်းကြိုက် တယ်။ Coke လဲ အရမ်းကြိုက်တယ်။ သားသားကိုယ်ဝန်ရှိစဉ် ကျွန်မက Coke ကွာစေ့ အားတုိုင်းယားတိုင်း စားနေလို့နဲ့တူတယ်။ အချိန်တုိုင်း အများဆုံး စားဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် သားသားကြိုက်တာလား မသိဘူး။ သားသား ဗမာ စကားပြောရင် ရီတော့ရီရတယ်။ မေမေ ရေသောက်ချင်တယ်လို့ မပြောဘူး။ 'ရေသောက်' တဲ့။ စားချင်ရင် စားတဲ့။ ချီစေချင်ရင် 'ချီ' တဲ့။ ပိုးဟပ် အရမ်းကြောက်တယ်။ 'ကောင်ကောင်ရှိတယ်' ဆိုပြီး မီးဖိုချောင် ဘယ်တော့ မှ မလာဘူး။ ဒါပဲပြောတတ်သေးတယ်။ ၁ခါ ကျွန်မကွာစေ့ စားနေတာ သားသား မြင်တော့ သားသားက 'I want it' တဲ့။ ကျွန်မ အံတောင် အော်သွား တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီနေ့က အဲဒီစကားကို ပထမဆုံးပြောတာ။ သားသားက ၁ခါ၁လေမှ စကားကို အဲဒီလိုထ ထပြောတတ် တယ်။ Coke သောက်ချင်ရင် 'Coke တယ်' တဲ့။
ငွေဆောင်က တည်းတဲ့ ဘန်ဂလိုရှေ့တွင်
သားသားကိုစိတ်ပူတာ ၁ခုရှိတာ ကျွန်မတို့တွေက ဗမာဆိုတော့ ဗမာစကား ကို နားလဲလည်ရမယ်။ ကောင်းကောင်းလဲ ပြောတတ်ရမယ်။ ပြီးမှ English, Mandarin ပေါ့။ ကျွန်မ စိတ်တင်းထားရတယ်။ သားသားကို ၄နှစ် ဘုန်းကြီးကျောင်းပို့ရင် ဗမာလိုတတ်နိုင်ပါတယ်။ သားသားက ရေကူးတာလဲ စိတ်ဝင်စား တယ်။ သားသားကို ၃နှစ်ခွဲလောက်မှ ရေကူးသင်ပေးမယ် တရုတ်စာ အိမ်ခေါ်သင်မယ် စိတ်ကူး ထားတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၁ခါ သားသားက ထမင်းအမာ မစားလို့ ဆရာမ တွေပြောလို့ သားသားရဲ့ဆရာဝန်မကိုမေးတော့ ဒီလိုပဲနောက်တော့ တဖြည်းဖြည်းစားလာလိမ့်မယ်တဲ့။ ကလေးတွေမှာ ယောင်္ကျားလေး မိန်းကလေးဆိုရင် ယောင်္ကျားလေးက တိုးတက်မှု နည်းနည်းနှေးတယ်လေ။ သားသားက ကျောင်းမှာ စိတ်အ၀င်စားဆုံးက Art အချိန်။ သူများကလေးတွေနဲ့ မတူပဲ သေသေသပ်သပ်လုပ်တယ်တဲ့။ သားသား စိတ်မ၀င်စားတဲ့ဘာသာဆို ၁ခြားမှာသွားနေတာတဲ့။ ကျွန်မအဲဒီဟာကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိဘူး။ ငယ်နေလို့လဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Gardens by the Bay တွင်
သားသားကို ရန်ကုန်ခေါ်သွားတော့ ပတ်ဝန်းကျင် အသစ်မှာ ပျော်လိုက်တာဆိုတာ မပြောပါနဲ့တော့။ ကျွန်မတို့ အိမ်က ခြံနဲ့ ဆိုတော့ အိမ်ထဲမ၀င်ဘူး။ အပြင်မှာပဲနေတယ်။ အပြင်မှာ ခွေးစုတ်ဖွားလေး ၂ကောင် ရှိတော့ အဲဒီခွေး ၂ကောင်က မတည့်တော့ လှောင်ထားတာ။ အဲဒါကိုသားသားက တုတ်နဲ့သွားထိုးပြီးစတာ။ ခွေးတွေက စိတ်ဆိုးပြီးဟောင်လေ သားသားက တခွီးခွီးနဲ့ရီလေ။ ပြောလို့လဲမရဘူး။ ကျွန်မအဖေက 'နင်တို့လာရင် ငါ့မြေးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပါစေ ငါရှေ့မှာ မဆူနဲ့' ဆိုပြီး သားသားက ပြောလို့ကို မရတာ။ ကျွန်မအချစ်ဆုံးခွေးလေးရှိတယ်။ အဲဒီခွေးက အရမ်းလိမ်မာတယ်။ သားသားက Zu Zu ခွေးလေး ကို ခေါင်းလေးကိုင်ချင်တယ်ဆိုတာ ပေးကိုင်တော့ သဘောတွေကျလို့။ နောက်နေ့ကျတော့ သားသားက Zu Zu ခွေးလေးမျက်နှာကိုလက်နဲ့ရိုက်လိုက်တာ အဲဒီနေ့ကစပြီး Zu Zu ခွေးလေးက သားသားကို တွေ့တာ နဲ့ တဟင်းဟင်းနဲ့၊ အရမ်းသဘောကောင်းတဲ့ခွေးတောင် သားသားကို လက်လန်တယ်။ ကျွန်မတို့ရန်ကုန် ပြန်တုန်းက သင်္ကြန်တွင်းဆိုတော့ သားသားကို အိမ်က ပလပ်စတစ် ပုံးအကြီးကြီးထဲမှာ ရေအပြည့်ထည့်ပြီး ချထားပေးလိုက်တယ်။ ရေတွေနဲ့ ၁ယောက်ထဲဆော့နေတာ။ ရန်ကုန်သွားတဲ့အချိန်က နွေရာသီဆိုတော့ အပူချိန်က ၄၀ နီးနီးရှိတော့ သားသားကို အပူရှပ်ပြီး ဖျားမှာဆိုးလို့ ဘယ်သွားသွား အိမ်မှာပဲထားခဲ့တယ်။ အရေးကြီးလောက်တဲ့နေရာတွေမှ ခေါ်သွားတယ်။ ကျိုက်ထီးရိုးလဲရောက်သေးတယ်။ သားသားက ကျိုက် ထီးရိုးမှာလဲ အရမ်းပျော်တာ။ ၁ခါ၁လေ နို့သောက်ဖို့တောင် မေ့တယ်။
(မျောက်လိုဆော့တတ်လို့ အဲဒီလို ပြတင်းပေါက်ကို သော့ခတ်ထားတာ)
အခုကြီးလာတော့ အရင်ကထက် တော်တော်ပြောင်းလဲလာတယ်။ အပြင်သွားရင် တွန်းလှည်းပေါ် မနေချင်ဘူး။ လျှောက်ပြေးချင်တာ။ ၂ယောက်စလုံးလဲ ၁ခါ၁လေ မနိုင်တော့ဘူး။ ၁ခါ၁လေ စဉ်းစားမိတာ မျောက်နဲ့များမှားမွေးလာသလားလို့။ မျောက်ကလေး ၁ကောင်ရထားသလိုပဲ။ ဒီအရွယ်က ခုန်တာတွေ တက်တာတွေ အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ ကျွန်မတုို့က ၇ထပ်မှာနေတော့ အရမ်းကြောက်ရတယ်။ ခုံတွေကိုဆွဲယူပြီး တက်နေမှာဆိုးလို့။ အိမ်က ပြတင်းပေါက်တွေကလဲ မှန်အကြီးကြီးကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ရင် ဟောင်းလောင်းလိုဖြစ်နေတာ။ အခု ၂နေရာကို နောက်ထပ်ပြီး ဆန်ကာပေါက်လို သံအချောင်းကာလိုက်ပြီး အဲဒါကို ဖွင့်လို့မရအောင် ၁ခါထဲသော့ခတ်ထားလိုက်ပြီ။ အိမ်မှာဆိုညည သားသားက ခုံတွေပေါ်တက်ပြီး ခုန်ခုန်ချတာ။ ၁ခါ၁လေ ထမင်းစားပွဲပေါ်တက်တက်ပြီးဆော့လို့ အော်ထားရသေးတယ်။ ကျွန်မက အိမ်မှာ ညဖက် ဘုရားစင်ရှေ့မှာ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းရင် သားသားကလာပြီး 'Happy Birthday to you' ဆိုပြီး သီချင်းစဆိုတော့တာပဲ။ ပြီးရင် ဖယောင်းတုိုင်ကို မှုတ်တော့တာ။ အဲဒီတော့ ကျွန်မတို့မှာ သားသားရှေ့မှာ ဖယောင်းတိုင်မထွန်းရဲဘူး။ ၁ခါသားသားကို Birthday Cake လုပ်ဖို့ အတွက် Slice ၁ခုဝယ်လာပေးပြီး Birthday အတု လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ သားသားက ဖယောင်းတိုင် ၃တိုင်ကိုကုန်တဲ့အထိ 'Happy Birthday to you' ဆိုပြီးမှမီးမှုတ်တာ။ ပြီးတော့ Cake တွေကို အပေါ်ယံစားပြီးထားသွားတာ။
သားသား ၂နှစ်ခွဲလောက်မှာ Peace sign စလုပ်တုန်းက သားသားကိုကျွန်မက လက်၅ချောင်းထောင်၊ လက်မ၊ လက်သူကြွယ် လက်သန်းကိုအောက်ချပြီး လက်ညှိုး လက်ခလယ်ကို မတ်နေအောင် ထောင်ရတာဆိုပြီး သင်ပေးထားတော့ ကျွန်မက Peace ဆိုရင် သားသားက ကျွန်မသင်ပေးထားသလို လုပ် တာ။ နောက် ၃ရက်နေတော့ အဲဒီလို မလုပ်ရတော့ဘူး။ သားသားကို Peace ဆိုတာနဲ့ ချက်ချင်းထောင် တတ်နေပြီ။
ရန်ကုန်မှာ ဆန်ပြုတ်လုံးဝမသောက်ဘူး။ နို့ပဲသောက်တာ။ နို့ဗူးက ၂ဗူးဝယ်သွားတာ။ ကုန်သွားလို့ထပ်သွား ၀ယ်တော့သောက်နေကျ နို့မဟုတ်တော့ ပြောမနေနဲ့ သောင်းကျန်းတာ။ အဖိုးက သွားရှာပြီး ၀ယ်ပေးရ တယ်။ ရွာကိုသွားလည်တော့ သားသားက ကြောင်ပေါက်စလေးတွေ့တော့ ကြောင်ပေါက်စလေးကို အမြီးကကိုင်ပြီး ဆော့တာ။ ကြောင်ပေါက်စလေးက စိတ်တိုပြီး ကုတ်တာလဲရှိသေးတယ်။ ကြောင်ပေါက် စလေးရဲ့ ဗိုက်ကို အကြိမ်ကြိမ်ကိုင်လှုပ်ပြီး ကစားတာ။ ကြောင်ကထွက်ပြီး ပြေးတော့ အတင်းလိုက်ဖမ်းတာ။ ကျွန်မက သားသား ကြောင်ကလေးကို သားချစ်ရင် နမ်းလိုက်ဆိုတော့ ပါးကို နမ်းတယ်။ သားသားကြောင်ချစ်တာ အချစ်ကြမ်း တယ်။ တလောကပဲ ကြောင်ကုတ်ခံလိုက်ရသေးတယ်။ တိုက် အောက် က ကြောင်ကုို ကန်လိုက်တာလေ။ တိုက်အောက်က ကြောင်တွေက သားသားမြင်တာ နဲ့ပြေးတော့ တာ။ သားသားကခွေးတွေ ကြောင်တွေကိုချစ်တယ်။ ခွေးကို Dog ကြောင်ကို မီးညောင်တဲ့ ရန်ကုန်မှာ အဒေါ်တွေ အဖိုး အဖွားတွေက သားသားကို ၁ခုခုပြောလိုက်ရင် သားသားက NO ဆုိုပြီး ပြန်ပြောတော့တာပဲ။ ကျွန်မတို့ ငွေဆောင်သွားတော့အရင်ဦး ဆုံးရေထဲဆင်းတာ သား သားလေ။ သားသား က သဲအဖြူ မြင်ရင် မရဘူး။ အတင်းတွယ်ကုတ်ပြီး လူပေါ် တက်တော့တာ။ သဲအဖြူ မြင်ရင် မရဘူး။ အရမ်းရွံတယ်။ ကမ်းစပ်မှာရေကို နာရီဝက် ၁နာရီပေးဆော့တယ်။ မနက်မိုးလင်း လာလို့ နိုး ပြီဆုိုတာနဲ့ ရေထဲဆင်းမယ်ဆိုတာချည်းပဲ။ ဒီပြန်ရောက်တော့ ရန်ကုန်မှာ ဘယ်လောက်သောင်း ကျန်း လာသလဲဆိုရင် သားသားဒူးခေါင်းက နဂိုအသားအရည် ဖြူတာကနေ သိသိသာသာချည်းကို ညို သွားတော့ တာ။
ကျောင်းက School Activities တွင်
ကျောင်းမှာကော အိမ်မှာကော သားသားကို်ယ်ပေါ် ၁ခုခု ရေကျလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ထမင်းလုံးကျရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ မုန့်ကျသွားရင်ဖြစ်ဖြစ်ကျသွားလို့ကတော့ အော်တော့တာ။ သားသားအရမ်းကြိုက်တဲ့ iPad ပေါ်ကျရင်လဲ မရဘူး။ သားသားက သူသုံးတဲ့ iPad ကိုသန့်နေအောင် ထားတာ။ ၁ခါ၁လေ ကျွန်မတို့ ၂ယောက်က သားသားကို လူကဖြင့် သေးသေးလေးရှိသေးတယ်။ အရမ်းကြီးကျယ်တာပဲဆိုပြီး စကြတာ။ ကလေး အရုပ်ရောင်းတဲ့ Kiddy Palace ရောက်ရင် သားသားက အရမ်းပျော်တာ။ သားသားကြိုက်တဲ့အရုပ်တွေ့ရင် ယူပြီး တွန်းလှည်းပေါ်တက်ပြေးတော့တာပါပဲ။ ရှင်းလိုက်ရရော။ ၁ခါ၁လေ သားသားတွန်းလှည်းပေါ် မတက် ခင်၊ မယူခင်လေးမှာ သားသားကို သေချာရှင်းပြရတယ်။ သားသားနောက်၁ကြိမ်လာမှယူနော်ဆိုပြီး အဲဒီ အခါကျသားသားကအရုပ်နဲ့ကျေနပ်အောင်ဆော့တယ်။
၁ခါ သားသား crazy ဖြစ်နေတဲ့ Angry Bird အရုပ်အနီကောင်လေး သားသားဆော့ရင်နဲ့ ပေါက်ပြီးရေတွေ ထွက်ကျတော့ အရုပ်က ပြားသွားရော။ အဖိုးက ချက်ချင်းသွားဝယ်ပေးတဲ့။ အဖိုးဝယ်လာတဲ့ အရုပ်က မာတော့ သားက သိပ်မကြိုက်ဘူး။ နောက် ၁နေ့ ကျွန်မတို့ သားသားနဲ့အတူတူ Popular မှာ သွားရှာတော့ Angry Bird Playset တွေ့တယ်။ သားသားကိုပြလိုက်မိတယ်။ သားသားကကြည့်ပြီး ဆွဲယူသွားပြီး တွန်းလှည်းပေါ်တက်ထိုင်နေတော့တယ်။ ပြန်တောင်းလို့လဲ မရတော့ဘူး။ Angry Bird ၆ ကောင်၊ ၀က် ၄ကောင် ပြီးတော့ ပစ်တဲ့ခွလေး ၁ခု ဆောက်လို့ရတဲ့အတုံးလေးတွေပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ဈေးနှုန်း မရေးထားဘူး။ Discount Item ပဲ။ 29.90 - 59.90 တဲ့။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်မလဲ အလွန်ဆုံးပေးရမှ 59.90 ပဲဆိုပြီး Cashier ရောက်တော့ 89.90 ကျွန်မမှာ ချထားလို့လဲမရ။ ၀ယ်ခဲ့ရတော့တယ်။ ကျွန်မမှာရင်တွေခံလို့။ ကျွန်မက သားသားကိုဒီလပြီးပြီနော်လို့ ဆိုတော့ သားသားက 'Yeah, understand' တဲ့။ နောက် ၂ပတ်နေတော့ အဘိုးနဲ့ Kiddy Palace သွားတော့ သားသားက သူလိုချင်တာယူပြီး တွန်းလှည်းပေါ် တက်ထိုင်နေတော့တာ။ အဖိုးကပြန်တောင်းလို့လဲမရတော့ ပေးလိုက်ရတယ်။ အဖေက ကျွန်မဆီ Bill ပြန်တင်တယ်။
သားသားက သူနဲ့ရွယ်တူကလေးတွေနဲ့ဆို မတည့်ဘူး။ ၁ခါက သူဆော့နေတဲ့ အရုပ်ကို သူများက လာလုလို့ ထိုးလိုက်တာလား တွန်းလိုက်တာလား မသိဘူး ကျောင်းက ဆရာမက လာတိုင်တယ်။ သားသားကို ကျွန်မက Singaporean ကလေးတွေလို ပြောဆို ဆုံးမလို့မရတဲ့သူ မဖြစ်စေချင်ဘူး။ အဲဒီလိုဖြစ်မှာလဲကြောက်တယ်။ အဲဒါကြောင့်သားသား ကို ရိုက်လဲရိုက်တယ်။ နားလည်အောင်လဲပြော တယ်။ ၁ခါ၁လေ ကျွန်မကရိုက်ရင် သူ့အဖေရှိနေရင် အဖေဆီပြေးတော့တာ။ အဘုိုးရှိရင် အဘိုးဆီပြေး တယ်။
သားသားက Angry Bird Game နဲ့ဆော့တယ်။ နိုင်အောင်လဲဆော့တယ်။ အမှတ်များအောင်လဲဆော့ တယ်။ Level 1 ဆော့ပြီးပေမယ့် နောက်၁ကြိမ် ထပ်ဆော့လို့ အရင် အမှတ်ကျော်ရင် Angry Bird အကောင်လေးနဲ့လာပြတယ်။ အဲဒါဆို သားသားက ကျွန်မတို့ကို Hi5 ဆိုပြီး လက်ဝါးချင်လာရိုက်တော့တာ ပဲ။ သားသားက ကတာတွေလဲ ၀ါသနာပါတယ်။ ကျောင်းက ဆရာမတွေက သားသားက သီချင်းသံကြား တာနဲ့ ကတော့ တာပဲတဲ့။ သားသားက ဗုိုက်ပေါ်နေတာမြင်ရင် အကျီကိုမပြီးအောက်ချလိုက်တာ၊ တံတောင် ဆစ်မြင်ရင် အရမ်းအသဲယားတယ်။ လာလာကိုင်တယ်။ ကျွန်မတို့ ၂ယောက် က သားသားကိုစပြီး ဖက်ထား ရင် ပူးပူးကပ်ကပ်လုပ်နေတာမြင်ရင် အလယ်ကနေခေါင်းကြီးနဲ့ အတင်းကိုတွန်းဝင်တော့တာ။ သားသားကို ၁နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လက်ဆောင် Mickey-Mouse စက်ဘီးလေးဝယ်ပေးတယ်။ ၂နှစ်ပြည့်တော့ ကားလိုပုံစံထဲ မှာ ဘောလုံး အလုံး ၅၀ ပါတာဝယ်ပေးတယ်။ ၃နှစ်မပြည့်ခင်မှာ သားသား အရမ်းကြိုက်တဲ့ Mickey-Mouse Clubhouse Playset ၀ယ်ပေးတယ်။ ညညကျောင်းကပြန်လာရင် စနေ တနင်္ဂနွေ အိမ်နေရင် ဖြစ်ဖြစ် ဘောလုံး တွေနဲ့ဆော့တော့တာ။ တနင်္ဂနွေည သားအိပ်ပြီးဆိုရင် ပြန်ကောက်သိမ်းရတာ အလုပ် ၁ခု။ ဘောလုံး အလုံး ၅၀ဆိုတော့ အများကြီး ပြီးတော့ ၁ခြားဘောလုံးတွေထည့်ထားတာလဲရှိသေး တယ်။ အကျီဝယ်မယ်ဆိုရင် အရုပ်ပါတဲ့အကျီ ဒါမှမဟုတ် အရောင်တောက်တောက်မှ ကြိုက်တာ။ အရင်တုန်းက ဖေမေရွေးပေးတာ ၀တ်တယ်။ နောက် အခုသားသားက သူ့စိတ်ကြိုက်ရွေးပြီး ၀တ်တာ။
၁ခါ၁လေ သားသားက အံအားသင့်စရာကြုံလာရင် 'Oh My God ... Oh Nooooo' ဆိုပြီး ပြောတတ်ပါ တယ်။ သားသားကို ၁ခုခုကျွေးလို့ ကြိုက်တယ်ဆိုရင် လက်မလေးထောင်ပြီး Nice, Very Good ဆိုပြီးပြော တတ်တယ်။
သားလေးကို အခုနို့မှုန့်လုံးဝဖြတ်လိုက်ပြီ။ နို့အစား လူကြီးသောက်တဲ့နို့ဝယ်တိုက်တယ်။ နောက်ဆို Diapers ဖြုတ်ပြီး Toilet Training ကျင့်ရဦးမယ်။ ထမင်းများများကျွေးတယ်။ အရည်သောက်က အမြဲပါရတယ်။ ပဲ နီလေးဟင်းချိုချက်ကျွေးဖြစ်တယ်။ သားသားက အားလူး၊ ကြက်ဥ ဆိုအရမ်းကြိုက်တယ်။
သားသား တိုးတက်မှုလေးတွေကို ကျွန်မရဲ့ Blogမှာ မှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။
Blog လာလည်သူအားလုံး MERRY CHRISTMAS ပါ .....
at 1:54 PM Posted by Myo Mon Yee Oo
Thar Thar is so cute!! Merry Christmas to you too!
Mee Chit said...
အဟ မရေးတော့လည်း အကြာကြီး.. ရေးပြန်တော့လည်း အပြည့်ပါလား မမရေ.. သားသားက သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် ♥
မမွန်ရဲ့သားလေးက ချစ်စရာလေးနော် .. ဥာဏ်လည်းကောင်းမဲ့ပုံလေး......